Bakteria Mamono Bakteria ary Manana Hevitra Hafa
Nanantena ny hahita fomba hanaraha-maso ny aretin'andoha ao amin'ny sakafo, hitan'ny mpikaroka fa ny zava-maniry dia mamono bakteria . Hita tamin'ny fikarohana maro fa ny tsiranoka mahazatra, toy ny tongolo gasy, ny gilasy, ary ny kanelina, dia mety hahomby indrindra amin'ny bakteria E. coli .
Tao amin'ny fianarana any Kansas State University, ny mpahay siansa dia nanandrana zava-manitra maherin'ny 23 tao anatin'ny toe-javatra telo: karazana laboratoire artificial, tsy hay sakafon'ny hamburger, ary tsy salama.
Ny vokatra voalohany dia nanondro fa ny elatra dia nanana fiantraikany goavam-be teo amin'ny E. coli tao amin'ny hamburger raha ny tongolo lay dia nanana vokatra avo indrindra tao amin'ny laboratoire.
Ahoana kosa ny amin'ny tsiro? Niaiky ny mpahay siansa fa sarotra ny mahita ny fifangaroan-tsaka eo amin'ny tsiron'ny sakafo sy ny habetsaky ny zava-manitra ilaina mba hanakanana ireo aretina . Ny habetsan'ireo zavamanitra nampiasaina dia avy amin'ny iray isan-jato ka hatramin'ny folo isan-jato. Ny mpikaroka dia manantena ny hianatra bebe kokoa ireo fifandraisana ireo ary mety hamolavola tolo-kevitra ho an'ny mpamokatra sy ny mpanjifa.
Ny mpahay siansa koa dia nampitandrina fa ny fampiasana zava-manitra dia tsy manolo-tena amin'ny fanodinana ny sakafo. Raha ampiasaina amin'ny fampiasana zava-manitra ny habetsahan'ny E. coli amin'ny vokatra avy amin'ny hena, dia tsy nanala tanteraka ilay aretina izy ireo, ka noho izany dia ilaina ny fomba mahandro sakafo. Ny menaka dia tokony homana hatramin'ny 160 degrees Fahrenheit ary mandra-pahavitan'ny sokatra.
Ny mpanohitra sy ny zavatra hafa izay mifandray amin'ny hena tsy voamaina dia tokony hosasana tsara, indrindra amin'ny savony, rano mafana, ary vahaolana mazava.
Zavamaniry mamono bakteria
Zavamaniry toy ny zava-manitra mahafinaritra sy toa tsy manan-tsiny. Iza no mety hihevitra fa mety ho faty izany? Ny mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Kansas koa dia nahita fa ny kanelina dia mamono Escherichia coli O157: bakteria H7.
Ao anatin'ireo fandalinana ireo dia nisy santionan'ny siramamy apetraka teo amin'ny iray tapitrisa E. coli O157: bakteria H7. Navoaka ny rantsan-tongotra kanelina iray ary nijanona nandritra ny telo andro ny famokarana. Rehefa nanandrana naka ny santionan'ny sokatra ny mpikaroka dia hita fa 99.5 isan-jato ny bakteria dia rava. Fantatra ihany koa fa raha misy tsiranoka mahazatra toy ny benzoate siramamy na potassium sorbate dia nampidirina tamin'ilay fitambaran-javatra, saika tsy azo tsinontsinoavina ny isan'ireo bakteria tavela.
Mino ny mpikaroka fa ny fandinihana dia mampiseho fa azo ampiasaina tsara ny sinagônina mba hifehezana ny bakteria amin'ny sira tsy misy pentina ary mety hisolo ny hoditra amin'ny sakafo. Manantena izy ireo fa mety hahitana fahombiazana ny kanelina amin'ny fitantanana ireo aretina hafa mitondra aretina azo avy amin'ny sakafo toy ny Salmonella sy Campylobacter .
Ny fikarohana taloha dia nampiseho fa ny kanelina dia afaka mifehy ny mikraoba amin'ny hena ihany koa. Ny tena mahomby indrindra anefa dia tsy azo atao amin'ny ranom-paharatsiana. Ao amin'ny liquids, ireo akama ireo dia tsy mety hionona amin'ny feta (toy ny hena) ka mora kokoa ny manimba. Amin'izao fotoana izao, ny fomba tsara indrindra hiarovana amin'ny aretina E. coli dia ny fanaovana fepetra fisorohana. Tafiditra amin'izany ny fisorohana siramamy sy ronono tsy misy pentina, mahandro sakafo mahazatra ho an'ny hafanam-be ao anatin'ny 160 degrees Fahrenheit, ary manasa ny tananao aorian'ny fihinanana henan-tsakafo.
Zava-mahadomelina sy tombontsoa ara-pahasalamana hafa
Ny fampidirana ireo zava-manitra sasany ho an'ny sakafonao dia mety hanana tombontsoa azo avy amin'ny metabolika ihany koa. Ny zavamaniry toy ny rosemary, oregano, cinnamon, turmeric, dipoavatra mainty, gera, vovon-doko ary paprika dia mampitombo ny asan'ny antioxidantan'ny ra ary mihena ny valin'ny insuline. Ankoatra izany, ireo mpikaroka Penn State dia nahatsikaritra fa ny fampidirana ireny karazan-tsakafo ho an'ny sakafo avo be amin'ny fihenan- kena dia mihena ny valin'ny triglyceride amin'ny 30% eo ho eo. Ny triglyceride avo dia avo amin'ny aretim- po.
Ao anatin'ilay fianarana, ireo mpikaroka dia nampitaha ny fiantraikan'ny fihinanana sakafo matavy be loatra miaraka amin'ny zava-manitra izay nanampy tamin'ny sakafo matavy tsy misy fofona. Ny vondrona izay nandany ny sakafo voatsindry dia nahitana ny valin'ny insuline sy ny valinteny momba ny triglyceride amin'ny sakafo. Miaraka amin'ireo tombontsoa ara-pahasalamana mahakasika ny fandaniana sakafo amin'ny zava-manan'aina, ireo mpandray anjara dia nitatitra fa tsy voan'ny aretina azo avy amin'ny gastrointestinal.
Milaza ireo mpikaroka fa mety hampiasana tsimokaretina manimba ny tsiranoka antioxidant toy ireo ao amin'ny fianarana. Ny tsindrin-tsakafo dia mifandray amin'ny fivoaran'ny aretina mitaiza toy ny arthritis, ny aretim-po, ary ny diabeta.
Ho fampahalalana fanampiny, jereo:
Zavamaneno Maty Ihany Manohitra ny E. Coli O157: H7
Mampidi-doza ny sakafo matsiro antioxidant
Mahavariana ny biby
Ireo aretina azonao alaina avy amin'ny biby fiompinao
Marina ve ny Famoronana?
Top 7 Bugs Feed on Humans
Ahoana no ahafahan'ny Antibiotika Mamindra Bakteria Miharatsy kokoa
Eastern Settlement (Greenland)
Kilasy inona no miasa tsara indrindra?
16 Fety Halloween ho an'ny zatovo kristiana
Helamàna Skateboard tsara indrindra
"Celeste Aida" Lyrics sy ny fandikan-teny anglisy
Ahoana ny fomba hananana bisikilety ny endriny samirery fitaterana
Fitaovam-piadiana Golf an'ny ankamaroan'ny Golf
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny gymnastic Floor Exercise
PGA Tour Rookies an'ny taona
Karazana lahatsary inona avy ny Pantom?
Ny fitiavana sy ny Brownings: Robert Browning sy Elizabeth Barrett Browning
Hobart sy William Smith Colleges GPA, SAT sy ACT Data
Fitiavana tsara indrindra
Mpanoratra momba ny fanoratana: EB White
Ny antony mahatonga ireo filoham-pirenena hampiasa marimaritra iraisana maro mba hampidirana ny lalàna momba ny lalàna
Miantehitra amin'ny fanerena ny taovam-pananahana ao anaty atody
Inona no manjo ny saka?
'Ny Fanasana' (2016)
Conservatives Politika sy Fivavahana amin'ny politika